စိတ်ကူးယဉ်လား၊ အရိပ် ၅၀ သည်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
J ကိုအမျိုးသမီးကနျြးမာရေး (Larchmt) ။ 2014 သြဂုတ် 21
Bonomi AE1, Nemeth JM, Altenburger LE, Anderson တို့ ML, Snyder တစ်ဦးက, Dotto ငါ.
နောက်ခံသမိုင်း: ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ပြသည့်လူကြိုက်များသောစိတ်ကူးယဉ်စာဖတ်ခြင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းမရှိသေးပါ။ Shades ငါးဆယ် - အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေသောအကြမ်းဖက်မှုများသည်အမျိုးသမီးများဘဝ၏အန္တရာယ်များနှင့်အပြုအမူများကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူမှုရေးဇာတ်ကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလေ့လာမှုကအရိပ်ငါးဆယ်ကိုဖတ်။ မဖတ်သောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကြားဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္crossပေါင်းစုံလေ့လာမှုဒီဇိုင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတားဆီးနိုင်သော်လည်းအရိပ်ငါးခုအတွင်းပြmessagesနာဖြစ်စေသောသတင်းစကားများကိုစားသုံးသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုပင်ကိုယ်မူလကိုယ်စားပြုမှုကိုပြုလုပ်သည်။
နည်းလမ်းများ- အနောက်အလယ်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုတွင်စာရင်းသွင်းထားသောအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများ (n = 18) သည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအပြုအမူများနှင့်ငါးဆယ် Shades ၏စာဖတ်သူများအကြောင်းအွန်လိုင်းကဏ္surveyစုံလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အမျိုးသမီး ၆၅၅ ဦး (အနည်းဆုံးပထမ ၅၀ Shades ဝတ္ထုကိုဖတ်ရှုသော ၂၁၉ ဦး နှင့် ၅၀ Shades ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှမဖတ်ရှုသော ၄၃၆) တို့ပါဝင်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်လူမျိုးအလိုက်ညှိနှိုင်းထားသောပုံစံမျိုးစုံပါသောပုံစံငယ်များသည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုအကြမ်းဖက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၅၀) Shades ၏စာဖတ်သူများနှင့်ဖတ်ရှုသူများမပါဝင်ပါ။ (သူတို့၏တစ်သက်တာအတွင်းဆိုက်ဘာအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်ကာယ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်); မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်း (ပြီးခဲ့သည့်လတွင်ခြောက်ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောရက်များ၌အရက်ယမကာငါးခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောစားသုံးမှု); လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ (သူတို့တစ်သက်တာအတွင်းလိင်ဆက်ဆံဖက်ငါးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကနှင့် / သို့မဟုတ်စအိုလိင်ကြင်ဖော်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်မကရှိခြင်း); ၄ င်းတို့၏သက်တမ်းတစ်ချိန်ချိန်တွင် ၂၄ နာရီအထက်အစာစားခြင်း၊
ရလဒ်များ: ဘာသာရပ်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံငါး Shades (18.6%, ဒါမှမဟုတ် 122 / 655, သုံးခုစလုံးတ္ထုကိုဖတ်ပါနှင့် 14.8%, ဒါမှမဟုတ် 97 / 655 အနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးဝတ္ထုမဟုတ်သုံးခုစလုံးဖတ်ပါ) ဖတ်ပါ။ age- နှင့်ပြိုင်ပွဲ-ချိန်ညှိမော်ဒယ်များခုနှစ်, nonreaders နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်သုံး) သည်အနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့သူအမြိုးသမီး, အော်အော်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကျိန်ဆိုသူတစ်ဖက်ကသူတို့တစ်သက်တာကာလအတွင်းခဲ့ကြ nonreaders ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် သူတို့ကို (ဆွေမျိုးအန္တရာယ် [RR] = 1.25) နှင့်သူကိုမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု / စာသားမက်ဆေ့ (RR = 1.34) ကိုအပ်, သူတို့သည်လည်း (RR = 1.80) အစာရှောင်ခြင်းသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်နဲ့သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာကာလအတွင်းတစ်ချိန်ချိန်အစားအစာအကူအညီအထောက်အပံ့များကို (RR = 1.77) ကိုသုံးနိုင်သည်။ nonreaders နှင့်နှိုင်းယှဉ်, သုံးခုစလုံးတ္ထုကိုဖတ်တဲ့သူအမျိုးသမီးသည်လွန်ခဲ့သောလက (RR = 1.65) တွင်မူးရူးသောက်စားသတင်းပို့ဖို့နဲ့အစားအသောက်အကူအညီအထောက်အပံ့များကို (RR = 1.65) ကို အသုံးပြု. သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်နဲ့သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာကာလအတွင်းငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိင်ဆက်ဆံမှုမိတ်ဖက်ရှိခြင်း (RR = 1.63) ။
နိဂုံး: ရုပ်ရှင်၊ ဝတ္ထု၊ တေးဂီတ၊ သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြသနာများပုံဖော်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ဘဝတွင်ဤအန္တရာယ်များနှင့်အပြုအမူများကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူမှုရေးဇာတ်ကြောင်းကိုဖန်တီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ညွှန်းသည့်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွဲငါးခုအရိပ်များအပါအ ၀ င်အမျိုးသမီးများ၏ဘ ၀ များတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပိုင်းကဏ္ study လေ့လာမှုကယာယီအားမဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်းဆက်ဆံရေး၏အစီအစဉ်သည်အရေးမကြီးပါ။ ဥပမာ - အမျိုးသမီးများသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းသောအပြုအမူများကို ဦး စွာတွေ့ခဲ့လျှင် (ဥပမာ - အစာမစားသည့်အစာစားခြင်း)၊ Shifty Shades ဖတ်ခြင်းသည်ထိုအတွေ့အကြုံများကိုထပ်မံအတည်ပြုပြီးဆက်စပ်စိတ်ဒဏ်ရာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ အလားတူစွာ၊ အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်အကဲဖြတ်ထားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုမကြုံတွေ့မီ Shifty Shades ကိုဖတ်ပါကထိုစာအုပ်သည်ထိုအပြုအမူများစတင်ခြင်းကိုအပြုအမူအတွက်နောက်ခံအခြေအနေဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။